Kosta Rikà: Nandao ny antoko politikany i Andrea Morales · Global Voices teny Malagasy
Kosta Rikà: Nandao ny antoko politikany i Andrea Morales
Voadika ny 23 Jona 2018 4:09 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny Jiona 2008)
Niteraka adihevitra i Andrea Morales, solombavambahoaka avy amin'ny Antokon'ny Hetsiky ny Olom-pirenena (PAC) raha niala tamin'ny antoko politikany izy, izay nisy azy nandritra ny taona maro lasa. Maro no mihevitra fa efa nampoizina ny fialàny, ary ny hafa kosa nahatsapa fa voatery nandray izany fanapahan-kevitra izany izy.
Niatrika faneriterena ara-politika nandritra ny andro vitsy lasa ny vehivavy mpikambana ao amin'ny kongresy. Faneriterena izay tsy maintsy natrehan'ny vitsy an'isa, ary araka ny nosoratan'ilay bilaogera fa toa te-hanampy marina ny firenena izy. Tahaka an'i Cristian Cambronero avy ao amin'ny Fusil de Chispas nilaza hoe,”mpanararaotra na tsia, kajikajy na tsia, sivika ny fihetsiny.”
Niresaka momba ity zava-nitranga vao haingana ity ny tontolon'ny bilaogy Kosta Rikana, ka nankasitraka ny sasany ary ny hafa kosa nanohitra. Na izany aza, samy nanome ny heviny ny tsirairay. Cambronero, izay nanohana ny PAC taloha ary manenina ny safidiny ankehitriny, nilaza hoe:
Mambabo sy malefaka ny fihetsik'i Morales. Amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra feno herim-po hafa noho ny ao amin'ny antokony, nanjary toetrandro mahafinaritra eo am-pelatanan'ny antoko ofisialista ity depiote ity, raha jerena ireo sehatra samihafa ao amin'ny PAC manakiana ny zava-misy noho izy nandray fanapahan-kevitra tsy nanohitra governemanta.
Ny fanontaniana fototra aterak'izany dia hoe: inona no mitranga rehefa tsy miombon-kevitra amin'ny antoko ofisialy ny solombavambahoaka iray ary mandray fanapahan-kevitra manokana? Tokony hesorina ao amin'ny antoko ve izy? Iray tamin'ireo fanapahan-kevitra voatsikera ny fanapahan-kevitr'i Morales tsy hanohitra ny lalàna amin'izay ankatoavina ny Fifanarahana Ara-barotra Malalaka. Tamin'ny fiarovan-tenany, nilaza izy fa maneho ny sitrapon'ny vahoaka izay nifidy an'izany fifanarahana izany ny fanapahan-keviny.
Dean Córnito ao amin'ny bilaogy La Suiza Centroamericana [es]:
Mahafantatra ny fomba fijerin'i Andres Morales mikasika ny Fifanarahana Ara-barotra Malalaka ny tsirairay. Na dia tsy manohana izany aza aho, dia nilaza hatrany am-piandohana izy fa tokony hanaja ny sitrapon'ny vahoaka sy ny fahitany an'izao tontolo izao, midika izany ho tsy sakana amin'ny fampiharana ao amin'ny Kongresy raha nankatoavina tamin'ny fitsapan-kevi-bahoaka ny Fifanarahana Ara-barotra Malalaka.
Manohy manao fahadisoana hatrany ny PAC, ary very fanohanana tsikelikely araka ny filazan'i Roy Rojas ao amin'ny News Star [es]. Manoratra ao amin'ny lahatsoratra Kosta Rika sy ny Lalao Politikany izy fa mikorontana ny PAC ary noho ny fisekosekon'ny mpitarika azy Ottón Solís, tsy hahatsikaritra izany mihitsy izy.
Inona no mitranga amin'ny antoko politika izay nilaza hoe “tsia” amin'ny fanelingelenana. Ny antoko izay naneho ny feon'ny vahoaka? Ankehitriny lasa antoko iray hafa ny PAC, ary noho ny tsy fahampian'ny traikefa, dia manao fahadisoana izay mety hahavoa mafy azy amin'ny hoavy akaiky izy.
Maneho fanohanana an'i Moralles noho ny fitsanganany ho an'ny mpitarika ny PAC ihany koa ny bilaogy Manda Güevo.
Na izany aza, tsy ny rehetra no manaiky an'io fanapahan-kevitra io. Nanoratra mivantana amin'ny fanehoana tsy fifaliana tamin'ny fihetsiky ny solombavambahoaka ny bilaogy La Foto Salió Movida:
Ny solombavambahoaka PAC Andrea Morales, dia tsy tokony hametra-pialana fotsiny ao amin'ny PAC, fa koa amin'ny sezany. Izany dia tokony hanaja ny fifanekena nosoniaviny tamin'ny antokony tany am-piandohan'ny fe-potoam-piasany. Nanana fanantenana niaraka tamin'i Morales aho, saingy ankehitriny, nariany ny ezaka nataony. Manohana ny fandraisana andraikitra tahaka izany aho, satria na dia miteny ny mifanohitra amin'izany aza izy, dia nasehony ny ohatra ratsy indrindra amin'ny filaminan-kevitra, tsy misy mivantana tahaka izany.
Noho izany dia mitohy ny adihevitra raha toa ka nety ny nataon'i Andrea Morales, na tokony hametra-pialàna amin'ny sezany ao amin'ny Antenimiera izy. Na izany aza, nidera ny fanapahan-keviny ny ankamaroan'ny bilaogera ary mihevitra fa voatsikera tsy ara-drariny tamin'ny fanapahan-keviny manokana izy.